Wasaaradda kalluumaysiga ee Puntland oo heshiis la gashay shirkad kalluumaysi oo laga leeyahay Thailand |
Wasaaradda kalluumaysiga ee Puntland oo heshiis la gashay shirkad kalluumaysi oo laga leeyahay Thailand
Isniin, Oktoobar 28, 2013 — Wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Puntland ayaa heshiis la gashay shirkad kalluumaysi oo dalka Thailand laga leeyahay. Heshiiska ayaa u ogolaanaya shirkaddaas in ay ka kalluumaysato xeebaha Puntland.
Wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Puntland Maxamed Faarax Aadan iyo Fu’aad Mahdi oo wakiil ka ahaa shirkadda, ayaa heshiiskaas si wadajir ah u saxiixay. Wasiirka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in heshiisku uu yahay mid ay labada dhinacba dani ugu jirto.
Inkastoo uusan faah faahin dheeri ah ka bixin muddada heshiiska, xaddiga iyo noocyada kalluunka ah ee shirkaddaas loo ogolaaday , wuxuu hadana wasiirku sheegay in heshiiskani uu yahay mid kooban.
Waa markii ugu horreysey oo ay Puntland heshiis noocan ah la gasho shirkad kalluumaysi laga leeyahay dalka Thailand, wuxuuna kusoo aadayaa xilli ay xeebaha Puntland si sharci darro ah uga kalluumaystaan maraakiib iyo doonyo intooda badan laga leeyahay dalalka Asia.